Rockstar dia nanala ilay glitch "Armored Kuruma" tao amin'ny GTA V Online ary niteraka resabe | Vaovao momba ny gadget
Rockstar dia nanala ny glitch "Armored Kuruma" tao amin'ny GTA V Online ary niteraka resabe
Grand Theft Auto V dia tsy isalasalana fa lalao manamarika fotoana. Rehefa nivoaka izy dia maro amintsika no nanana fanantenana napetraka teo amboniny, ary tanteraka izany. Nanjary iray amin'ireo famokarana audiovisual manaitra indrindra tamin'ny tantara ny lalao ary namaly ny vahoaka. Saingy aorian'ny "effet boom", dia mitohy mivezivezy, ny maody an-tserasera dia manintona mpilalao marobe ary faly amin'izany izy ireo, na efa. Ary izany ve Rockstar dia nametraka ny iray amin'ireo "bug" malaza indrindra amin'ny lalao ary nahatonga anao hahazo vola mora foana, izay niteraka resabe ary niteraka ny tsy fahazoan'ny mpampiasa maro izany.
Ho an'ireo izay tsy nahalala ny tetika, dia ny fandehanana any amin'ny garazy avy hatrany taorian'ny fanatanterahana fandrobana tao amin'ny lalao video, sy ny fandosirana tao Kuruma mifono vy, fa tsy amin'ny môtô. Amin'izany fomba izany dia avoaka be ny fiarovana ary ny fahafahan'ny fanatanterahana izany dia mitombo haingana tokoa.
Na izany aza, Tamin'ny 26 Janoary, tonga ny inona ny fanavaozana farany farany an'ny GTA Online, ary tsy niandry ela fa ho tsapan'ny mpiserasera fa lasa ilay fika hahazoana vola mitentina iray tapitrisa dolara ao amin'ny GTA.
Niteraka resabe izany na tamin'ny tambajotra na tamin'ny Steam. Nanambara ireo mpampiasa fa hijery mafy kokoa izy ireo amin'ny fahafahan'ny fisolokiana amin'ny lalao, na dia marina aza. Tokony hotadidintsika fa ny Rockstar dia misy fanavaozana sy fomba filalaovana tsy tapaka ary maimaim-poana, zavatra izay tsy azon'ny orinasa hafa toa an'i Capcom lazaina, ohatra. Vahaolana tsotra fotsiny no ataon'izy ireo hahazoana vola izay tsy dia etika loatra. Raha ny fahitako azy dia tsy rariny ny mitaraina momba izany, fa koa, ireo forum forum momba ny lalao video sy ny toeram-pivoriana dia mahalala ny ady hevitra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Rockstar dia nanala ny glitch "Armored Kuruma" tao amin'ny GTA V Online ary niteraka resabe
Ny valin'ny Geekbench an'ny Huawei P10 Lite dia voasivana ao amin'ny tambajotra
Ny bateria Samsung Galaxy S8 dia 3,250mAh ary 3,750mAh ho an'ny S8 Plus